iFixit inotiratidza mukati meApple Watch Series 6 | Ndinobva mac
iFixit inotiratidza mukati meApple Watch Series 6
Sezvo iri tsika nguva dzese Apple painoburitsa chishandiso chitsva, vakomana kubva iFixit ivo vanokurumidza kubata unit uye voenda naro parutivi kuti vaone mukati. Ivo vanoongorora zvemukati zvikamu, vozvienzanisa neshanduro dzekare, kuti vawane pfungwa yemisiyano yavo inokosheswa mumuviri.
Pamusangano weChipiri wadarika, Apple yakatiratidza iyo nyowani Nhepfenyuro dzeApple 6. Mazuva mashoma gare gare yaive yave kuwanikwa, uye iFixit yatove neyuniti mulabhoratri yavo, uye vakatove vaisa iyo screwdriver mairi. Ngatione zvavakawana.
Apple yatotanga chirongwa chitsva cheApple Watch 6, uye ivo vatotanga kusvika kune vashandisi ve savvy vakazvitenga musi iwoyo wavakatanga. Chimwe chezvikamu izvi chatove mumaoko evanogadzira e iFixit, uye nekukurumidza ivo vatoita kare "Chitunha".
Kubva yekutanga beta yewatchOS 7 takaona kuti Apple yakanga yasiya basa re Simbisa kubata, uye muchikamu ichi zvakasimbiswa kuti chikamu ichi hachisisipo kana changovhurwa. Nekuda kweizvozvo, zviri nyore kubvarura skrini uye nekuwana mukati maro.
Yakareba bhatiri asi zvakafanana kuzvitonga
Bhatiri uye haptic mota yakakura kupfuura mashanu akateedzana
Uye chinhu chekutanga chakabata matekinoroji ihwo hukuru hwakakura hwebhatiri, zvichienzaniswa neChishanu 5, kunyangwe Apple ichizivisa huwandu hwakaenzana hwemaawa gumi nemasere. Zvinoenderana neIFixit, iyo 18mm Apple Watch Series 6 bhatiri ine inokwana 44 Wh, 3,5% kupfuura akateedzana 5. Iyo 6mm Apple Watch Series 40 ine 8,5% yakakura bhatiri.
Zvinonzwisisika kuti kunyangwe bhatiri racho rakati kurei kupfuura akateedzana apfuura, Apple inoenderera ichiti kuzvionera kwechigadzirwa kuchiri maawa gumi nemasere. Izvi imo nekuti nyowani S6 processor inofanirwa kushandisa simba rakawanda, uye itsva maUSEN kumashure maseru eoximeter.
Izvo zvinewo kucherechedzwa kuti iyo haptic injini yemhando nyowani yakakura kudarika iya yezvakateedzana zvakapfuura. Panyaya yezviyero zvekunze, iyo Apple Watch yakadzikira zvishoma. Kukora kweiyo 6 series ndeye 10,4 mm., Zvishoma pasi pe10,74 mm. akateedzana 5.
Chekupedzisira, ivo havana kukwanisa kuwana iyo nyowani yekumashure sensor yekuyera iyo okisijeni muropa, sezvo iri dumbu rose uye haigone kupatsanurwa pasina kuiparadza. Kana ndangoona, ini ndatozvinunura kubva pakubvarura yangu….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » iFixit inotiratidza mukati meApple Watch Series 6
Kutamba Spotify Kutenderera Mimhanzi paApple Kutarisa Kunogona Kuve Kwechokwadi Munguva pfupi
Kubhadhara pamwedzi kweAppleCare + kunosvika kuGerman neUnited Kingdom.